Nanao hetsika fanoherana ny kolikoly nandaniana ny lalàm-pifidianana teny amin’ny Antenimierampirenena ny Wake Up Madagascar, teo anoloan’ny lapan’ny Tanàna, Analakely, ny faran’ny herinandro teo: fanangan-tanana toy ny fanaon’ny depiote, nanehoana fa leo amin’ny ataon’ny mpitondra ny vahoaka.
Nofaranana omaly ny fanavaozana ny lisi-pifidianana. Na izany aza, tsy mbola nanonta printy, satria mila andrasana ny isa sy ny famaritana ny biraom-pifidianana vaovao izay ferena ho 700 ny mpifidy, araka ny lalàm-pifidianana vaovao. Mbola azon’ny Ceni atao koa ny mangataka ny fanokafana izany hatramin’ny 15 mey.
Anisan’ny imasoana ny fananganana ny rafi-pitsarana iadiana amin’ny kolikoly tamin’ny dinika momba ny paikadim-pampandrosoana faha-11, niarahan’ireo mpiara-miombon’antoka sy ny governemanta malagasy, teny Mahazoarivo, ny faran’ny herinandro teo. Teo koa ny amin’ny fampandrosoana ny faritra atsimo iharan’ny kere.